Daawo Muuqaalkaan Waa Dukumenteri laga Sameeyay Dalkeena Somalia. - Caasimada Online
Home Warar Daawo Muuqaalkaan Waa Dukumenteri laga Sameeyay Dalkeena Somalia.
Daawo Muuqaalkaan Waa Dukumenteri laga Sameeyay Dalkeena Somalia.
Soomaalidu waxeey tiraahdaa nin aduunyo joogoow maxaa aragti kuulaaban Maanta anoo dhex mushaaxayo Webka Dhanka Muuqaalka ah ee dhawaan hawada soo galay ee Daawo24.com ayaan waxaan arkay Muuqaal aan la yaabay iyo sida Dalkeena u baaba’ay iyo sida aan isku dileeyno.
Hadaba Aqristoo Ula jeedka aan idiin kugu soo xulay Muuqaalkaan waa mid aad ka arki karto Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalkeena soo maray oo laga sameeyay Film Dukumeenti ah oo soconaya 30 minit nala daawo kadib Fikradaada aan kula wadaagno.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA DUKUMEENTIGA: